I-NAV - iQuanzhou Omi Apparel Co, Ltd
Izindwangu zoqalo zenziwa ngemicu yoqalo. I-bamboo yaziwa ngamanani ayo esakhiwo sokhuni; kodwa-ke, ubuchwepheshe bamuva bukwazile ukusungula into entsha ngoqalo oluyintambo / imicu. I-bamboo fiber uqobo iyinto entsha kepha imboni yezintambo iqale ukuyihlanganisa nezinye izinto ezifana nokuhlelwa okubanzi kwezindwangu kufaka ne-spandex. Uqalo uqothulwa kuqala ube izingcezu ezincane ngaphambi kokuba i-enzyme yemvelo ibole futhi imunce amanzi bese iwageza ukuze kudilike ingaphezulu le-fiber yoqalo.
Ukotini noqalo spandex ijezi zenziwa ngezinto eziphilayo kanye nenduduzo. Zombili ziyizinto eziphilayo ngakho-ke kunconyelwa kakhulu ezemidlalo ngoba iyaphefumula futhi inobungane besikhumba. Umkhuhlane ngeke usicasule isikhumba, empeleni, uzomunca izithukuthuku bese uyoma ngokushesha ngakho-ke ulungele abagijimi nokuningi. ISportek inokuhlelwa okubanzi kukakotini noqalo lwejezi le-spandex kuyindawo efanelekile yokuthola ukwakheka okuhle ngekhwalithi ephezulu.
Yizinto eziphilayo futhi ezisasebenza kakhulu zikwenza kube yigugu kangaka, futhi ilwa namagciwane. Ucwaningo lukhombisa ukuthi izindwangu zoqalo zinezinga elithile lempahla elwa namagciwane ekulweni nezifo ezithile njengeStaphylococcus aureus ne-Escherichia coli. Ngakho-ke empeleni sivikela isikhumba ezindaweni ezinzima. Ungqimba oluhle lwemisebenzi yezemidlalo engaphandle lapho kunamalanga amaningi, amanzi namahlathi. Noma ikuphi ukuhlangana ungqimba lwe-bamboo spandex jersey kuzokuvikela ezifweni zesikhumba ezivela emvelweni.